ယခုအခါဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ပူးတွဲဒီဂျစ်တယ်နိုင်ငံသားများမဟာမိတ်အဖွဲ့ - နာဂရာအစီရင်ခံစာတွေ့ရှိချက် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ယခုအခါဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောအမေရိကန်စက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သောပူးတွဲဒီဂျစ်တယ်နိုင်ငံသားများမဟာမိတ်အဖွဲ့ - NAGRA အစီရင်ခံစာမှတွေ့ရှိရသည်
ဝါရှင်တန်ဒီစီ, သြဂုတ်လ 6, 2020 - ဒီဂျစ်တယ်နိုင်ငံသားများမဟာမိတ်အဖွဲ့ နှင့် NAGRA အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတရားမဝင်ခိုးကူးခွန် ၀ ယ်ယူခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောစက်မှုလုပ်ငန်းများသို့မည်သို့ကူးစက်သွားသည်ကိုပြသသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာကိုယနေ့တွင်ပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ ဖန်တီးသူများထံမှခိုးယူခြင်း၊ တရားဝင်တီဗီအော်ပရေတာများအားရှောင်ကွင်းခြင်းနှင့်စားသုံးသူများအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။ “ ၀ င်ငွေအတွက်အချည်းနှီးသောငွေကြေး” သည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောလက်လီရောင်းချသူများနှင့်လက်ကားရောင်းသူများနှင့်တရား ၀ င်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှရှုပ်ထွေးသောရှုပ်ထွေးသောဂေဟစနစ်သည်အမေရိကန်အိမ်ထောင်စုကိုးသန်းအားတရားမ ၀ င်ခိုးကူးမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမည်ကဲ့သို့ပေးသည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော်ဖြင့်ဆိုလျှင်ပင်လယ်ဓားပြကြေးပေးသွင်းမှုအင်တာနက်ပရိုတိုကောတယ်လီဗေးရှင်း (PS) ဟုခေါ်သည် IPTV) ၀ န်ဆောင်မှုများသည်တရားမ ၀ င်အမေရိကန်စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများနှင့်အကျိုးအမြတ်များများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်ပင်လယ်ဓားပြကြေးပေးသွင်းမှု၏လူသိနည်းသောရှုထောင့်များကိုအာရုံစိုက်စေသည် IPTV အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်၊ ဝင်ငွေနှင့်အမြတ်အစွန်းများကိုဆန်းစစ်သည်၊ IPTV ဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးမော်ဒယ်များ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပင်လယ်ဓားပြများသည်စားသုံးသူများအတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ malware အက်ပလီကေးရှင်းများမှတစ်ဆင့်ပျံ့နှံ့ခြင်းမှသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုတားမြစ်သည့်အကြမ်းဖက်လိုင်းများကဲ့သို့ကြည့်ရှုသူများအားအန္တရာယ်ကျရောက်စေသောတရားမ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများဖြန့်ဖြူးခြင်းသို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသတိပေးသည်။
“ ပင်လယ်ဓားပြတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်စားသုံးသူတွေ၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အခြားသူတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိမှုအတိုင်းအတာဟာစက်မှုလုပ်ငန်းအရွယ်အစားကိုတိုက်ရိုက်အချိုးကျနေတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဂေဟစနစ်ရဲ့အကျယ်အ ၀ န်းကိုကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားမသွားအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နိုင်ငံသားများမဟာမိတ်အဖွဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတွမ်ဂယ်ဗင်ကပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒီအစီရင်ခံစာဟာခေတ်နောက်ကျတဲ့ဥပဒေတွေ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိခြင်းနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိခြင်းဟာသူခိုးတွေ၊
စာရင်းပေးသွင်းခြင်း၏စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သောသက်ရောက်မှုနှင့်နည်းဗျူဟာများကိုနားလည်ခြင်း IPTV မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင်တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာဖြစ်သောအကြောင်းအရာများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောတိုက်ပွဲကိုဤအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည့်ပင်လယ်ဓားပြများသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်” ဟု NAGRA ၏ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာဒါရိုက်တာမိုက်ကယ်ရှပ်ကပြောသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နိုင်ငံသားမဟာမိတ်အဖွဲ့အားခိုးကူးခွေလှုပ်ရှားမှုများကိုထိထိရောက်ရောက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးပေးနေသည့်အတွက်ပြCitizနာကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပြောကြားလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှု၊ ခိုးကူးဂေဟစနစ် - နောက်ဆုံးတွင်ကြည့်ရှုသူများအားတရား ၀ င်အကြောင်းအရာတန်ဖိုးကွင်းဆက်တွင်ထားရန်ဖြစ်သည်။ ”
NAGRA ၏ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ ပင်လယ်ဓားပြများမည်သို့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ“ ငွေရေးကြေးရေးအတွက်ငွေရေးကြေးရေး” အစီရင်ခံစာသည်အသေးစိတ်ကျသောဂေဟစနစ်ကိုဖော်ပြထားသည်။
ယူအက်စ်တွင်ခန့်မှန်းခြေ ၉ သန်းသော broadband သုံးစွဲသူများသည်ပင်လယ်ဓားပြကြေးပေးသွင်းမှုကိုအသုံးပြုသည် IPTV ဝန်ဆောင်မှု။ ၎င်းတို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချသောအွန်လိုင်းစျေးကွက်များအတွင်းအနည်းဆုံးအမေရိကန်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည့်စတိုးအသွင်အပြင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ လူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာများနှင့်စတိုးဆိုင်များမှဤ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရယူသည်။
အမေရိကန်ခိုးကူးခွန်စာရင်းသွင်းခြင်းအတွက်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံတန်လုပ်ငန်းတစ်ခု သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်နှင့်ကြော်ငြာမှငွေကြေးထောက်ပံ့သောပင်လယ်ဓားပြများကို ၀ ယ်ယူသည့်အခါပင်လယ်ဓားပြထုတ်လွှင့်သည့်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချသည့်အခါပင်လယ်ဓားပြလုပ်ငန်းသည်ခြုံငုံ။ ကြီးမားသည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသည်သူတို့၏အဓိကထုတ်ကုန်ဖြစ်သောပရိုဂရမ်များအတွက်ဘာမျှမပေးနိုင်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ခန့်မှန်းခြေအမြတ်အမြတ် ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ (လက်လီရောင်းချသူများ) မှ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ (“ လက်ကားရောင်းသူများ”) အထိလည်ပတ်ကြသည်။
ဂေဟစနစ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ငွေပေးချေသူများနှင့်လူမှုမီဒီယာများအပါအ ၀ င်တရားဝင်ကစားသမားများပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ ဤတရားဝင်ကစားသမားများမိမိတို့၏အခန်းကဏ္ofကိုမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိသိရှိနားလည်နိုင်သည်ကိုအငြင်းအခုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ အခမဲ့အစီရင်ခံစာများတွင် malware တပ်ဆင်ရန်ဟက်ကာများနှင့် ပူးပေါင်း၍ သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ဘဏ္dataာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များခိုးယူခံရခြင်း၊ cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ adware, ransomware နှင့် botnets များဖြန့်ဝေထားသောငြင်းပယ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်စွန့်စားရမှုအန္တရာယ်မှစွန့်စားရပုံ of-service ကို (DoS) တိုက်ခိုက်မှုများ။ ဤရွေ့ကားအန္တရာယ်များကိုပါပြီ ဒစ်ဂျစ်တယ်နိုင်ငံသားများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကမှတ်တမ်းတင် နှင့် ဖက်ဒရယ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်မှသတိပေးခဲ့သည်.
NAGRA သည်လည်းပင်လယ်ဓားပြများ၏အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်များနေထိုင်ရာအစီအစဉ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် IPTV ဖောက်သည်များကိုအခြားအသုံးပြုသူများထံလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည် - ၄ င်းတို့သည် ၄ ​​င်းတို့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသောတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်၊ ဥပမာကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း၊ လိမ်လည်မှုကျူးလွန်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း။ တရားမ ၀ င်သောစိုးရိမ်ဖွယ်ရာတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် IPTV ၀ န်ဆောင်မှုများအရအမေရိကန်၏ပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လွှားရန်အထူးပြုလုပ်ထားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဟုအမည်တပ်ထားသောချန်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Al-Manar ကိုခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဤပြissuesနာများသည်အစီရင်ခံစာ၏အဓိကအချက်မဟုတ်သော်လည်းဒစ်ဂျစ်တယ်နိုင်ငံသားမဟာမိတ်အဖွဲ့ကနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှအာဏာပိုင်များအား၎င်းအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။
“ ကစားသမားအချို့ Piracy Subscription ကိုကမ်းလှမ်းတယ် IPTV ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သူတို့၏အမြတ်အစွန်းများကိုအွန်လိုင်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဝါကြွားနေသည်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးသည်သူတို့၏အကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်မှုမဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ ယင်းသည်ခေတ်မမီတော့သောဥပဒေများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ဓားပြများသည်ဖန်တီးသူများထံမှဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှုအရင်းအမြစ်သာမကစားသုံးသူများအတွက်လည်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်ခြင်းကြောင့်ဒေါ်လာဘီလီယံအနက်ရောင်ဈေးကွက်ကိုအလေးအနက်ထားရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။
ဒီဂျစ်တယ်နိုင်ငံသားမဟာမိတ်အဖွဲ့သည်အကျိုးအမြတ်မယူသော၊ ၅၀၁ (ဂ) (၆) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အများပြည်သူနှင့်မူဝါဒချမှတ်သူများအားအင်တာနက်ပေါ်တွင်စားသုံးသူများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုအာရုံစိုက်သည့်စားသုံးသူ ဦး စားပေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ဒီဂျစ်တယ်နိုင်ငံသားများသည်အင်တာနက်ကိုပိုမိုစိတ်ချရသောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေရန်အတွက်တစ် ဦး ချင်းစီ၊ အစိုးရနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်အင်တာနက်ပတ်သက်သူများအတွက်အရေးကြီးသောဆွေးနွေးမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုကြသည်။ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီတွင်အခြေစိုက်ပြီးဒီဂျစ်တယ်နိုင်ငံသားမဟာမိတ်အဖွဲ့သည်ထောက်ခံသူများတွင်ပုဂ္ဂလိကနိုင်ငံသားများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆေးဝါးနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းများသာမကအွန်လိုင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အင်တာနက်လုံခြုံရေးကိုအဓိကထားသောအခြားအသိုင်းအဝိုင်းများပါဝင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလာလည်ပါ www.digitalcitizensalliance.org.
ယခင်: အာဂျင်တီးနားရှိ Grupo Express သည် NAGRA မှ Multi-DRM နှင့်အတူယခု Express OTT ဝန်ဆောင်မှုကိုလုပ်သည်
နောက်တစ်ခု: OWNZONES သည်ဆက်သွယ်မှုအသစ်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်